‘परीलाइ प्रेम पत्र’ « Postpati – News For All
‘परीलाइ प्रेम पत्र’
सेतो कागजको पाना, एक वित्ता लामो कलम अनि आफ्नै वेगमा ढुकढुक गरिरहेको यो मन । तिमि को हौ मलाई थाहा छैन तर यति थाहा छ, यो दिलमा आएर वसेकी छौ । तिम्राे यादले जिन्दगीनै हरियाली र रङ्गिन वनाईदिन्छ । यस्तो कि खडेरीको वगैँचामा पानी परेजस्तो ।
प्रिय परी, यादहरुको महल बन्ने भए, सायद म संसारकै धनि वन्थेँ होला, त्यो पनि तिम्रो यादको ऋणले ।
तर मलाई तिम्रो याद होईन तिम्रो माँया र साथ चाहिएको छ । त्यसैले त तिम्रो यादको महल होईन, तिम्रो मायाँको झुपडि बनाउन तड्पिरहेको छु । वस् सबै सकियो अब चर्को घाम खडेरी र पानी छेक्ने पिरतिको छानो वाँकी छ ।
तिम्रो यादको कुरा गर्दा कताकता फरकपन अनुभुत हुन्छ, मानौँ कि यो मायाँ के हो ? किन लाग्छ माया ? …. जस्तो । जब तिम्रो माया गोधुली साँझमा वास खोज्न मेरो मनमा आउँछ नि तव मलाई संसार भुल्न वाध्य गराउँछ ।
तिम्रो नामका जो कोहिलाई देख्छु, त्यहाँ भित्रभित्रै तिमि मेरै दिलमा भएको अनुभुती गर्छु । मानसपटलमा तिम्रो नाम घरिघरी वर्षातको भेलझैँ उर्लिरहेको छ । कि कतिवेला त्यो भेलले म र मेरा सपनाहरु भल्खाडोमा पार्छ जस्तो ।
तिम्रो मायाँले वेलावेला महाभुकम्प झैँ धक्का महसुस गराइदिन्छ । कारण मलाई केही थाहा छैन वस् यति थाहा छ म तिमिलाई मायाँ गर्छु ।
तिमिलाई मायाँ किन गर्छु सायद मलाई पनि केहि थाहा छैन । यो प्रश्नको जनाफ म संग पनि छैन, र तिमिसंग पनि छैन । यो प्रश्नको उत्तरले तिम्रो माँयालाई खोजिरहेछ । जतिवेला मैले तिमिलाई चिनेको पनि थिइन, त्यतिवेलै तिम्रो मायाँलाई चिन्न पुगेछु । प्रिय परी, म धेरै स्वार्थी छु ! किनकी म तिमिलाई हैन तिम्रो मायाँलाई पछ्याइरहेको छु । म तिमिलाई हैन तिम्रो मायाँ पाउन चाहान्छु । त्यसैले मलाई स्वार्थी भन बरु ।
परी, यो संसार मायाले चलेको छ, सायद म आजसम्म पनि तिम्रै मायाँको आशाले वाँचेको छु । तिमिले मलाई मायाँ गर्छौ या गर्दिनौ त्यो त मलाई थाहा छैन तर तिम्रो जवाफले मलाई पक्कै पनि झटका लाग्नेछ । किनकि म अहिले तिम्रो मायाँको अनुभुती गरेर मात्र वाँचिरेको छु । यदि तिम्रो मायाँ साच्चिकै पाएँ भने पनि मलाई झट्का लाग्नेछ ।
अनि म खुसीले आकाशमा पुग्नेछु र आकाशका ताराहरुसंग खुसी साट्नेछु ।
तिम्रो मायाँको अभाव परेमा म यसरी छटपटाउने छु कि वालुवामा माछा कसरी तड्पिरहेको हुन्छ । अभावको खडेरी त्यतिवेला महसुस गर्नेछु ।
प्रिय परी, मलाई विश्वास छ तिम्रो पनि मन न हो मलाई वुझ्ने कोसिस गर …।
तिमिलाई थाहा छ नै होला, वोट फुल विनाको पनि त रहन्छ तर फुलसहितको वोटको कति महत्व हुन्छ भनेर । मेरो जिन्दगी एउटा वोट हो तिमि फुल वनिदेउ अनि कति रंगिन वन्छ जिन्दगी । सपनाहरुको महल तिमि र म संगै वनाउँ ।
आउ प्रिय परी ।
माँया प्रेमले सपना जलाउँछ भन्नेहरुको अगाडी सपनाहरुको दरवार तयार गरौँ । भविष्यहरुको नया सतम्भ निर्माण गरौ । हाम्रो सम्वन्धले वस, एक्लोपनको अनुभुती नदिलाओस भनेर हो ।
डियर परी तिमि के चाहान्छौ ?
तिमि मनको कुरा कागजको पानामा रङ्गाएर पठाउ अनि साझेदारी गरौँ, मायाँको महलमा वसेर भविष्यो खम्बा बनौँ । म तिमिलाई मायाँ गर्छु । आइ लव यु परी ।
यो कलमले पनि सुनसान रातमा विचरी कागजको पानालाई जसरी दुख दिइरहेछ, झक्झराइरहेछ, त्यसरी यो मानसपटल र यो मन मस्तिष्कले तिम्रो मायाँ खोजेर यो शरिर झक्झकाइरहन्छ ।
यो मेरो प्रेम मात्र हो, किनकी पहिलो पनि यहि हो अन्तिम पनि यही हो । वास्तविक प्रेम यही हो । तिमि वुझ्ने प्रयास गर परी …!
मलाई यस्तो लाग्छ म भित्र रहेका हरेक कमि कमजोरी र गल्तीहरु सवै तिम्रो मायाले विलाएर जानेछन, जसरी बाघको अगाडी मृग कहिल्यै रहँदैन ।
तिमि सवै वुझ्छौ परी ।
कसको मन कसरी दुख्छ तिमिलाई थाहा छ । त्यसैले त तिम्रा रहरका हरेक ग्रह उपग्रहमा मैले भ्रमण गरिसकेको छु ।
मेरो यो पहिलो प्रेम पत्र हो, मेरा आशाका किरणहरुले यो भनेका छन कि, तिमिले मलाई अर्को पत्र लेख्न वाध्य पार्दिनौ र यो पत्र व्यर्थ हुँदैन । यस मानेमा कि मेरो डर सवै तिम्रो मायामा हराउनेछ र हाम्रो मायाको कहानीमा बुनिएका प्रेमरुपी शव्दहरु यो कागजमा अटाउन सक्दैनन ।
यो पत्र लेख्नुमा मलाई रहर थियन प्रीय परी ! तर प्रत्यक्ष तिमिसामु भन्ने आँट पनि थिएन ‘म’मा । जव तिमिलाई देख्थेँ यो मन झसङ्ग हुन्थ्यो एकान्तमा भेटेर भलाकुसारी वुनौँ झै लाउँथ्यो र भन्न मन लाग्थ्यो आइ लव यु परी !
उही लक्ष्मी पौडेल अनुरागी !
रबर-फूल र रोबोटको प्रश्न